Amanqaku kaIan Cleary malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UIan Cleary
Indlela yokuthengisa nge-imeyile ephumayo inokuxhasa ngayo iinjongo zakho zokuthengisa
NgoLwesibini, Matshi 13, 2018 UIan Cleary
Intengiso engenayo ilungile. Uyila umxholo. Uqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi yakho. Uguqula ezinye zeso sigxina kwaye uthengise iimveliso kunye neenkonzo zakho. Kodwa… Inyani yile yokuba kunzima ngakumbi kunangaphambili ukufumana isiphumo sephepha lokuqala likaGoogle kunye nokuqhuba ukugcwala kwabantu. Ukuthengisa umxholo kuya kukhuphisana ngolunya. Ukufikelela kwezinto eziphilayo kumajelo eendaba ezentlalo kuyaqhubeka ukwehla. Ke ukuba nawe uqaphele ukuba ukuthengisa ngaphakathi akwanelanga, uyakufuna
NgoLwesibini, Novemba 11, 2014 Lwesine, Matshi 4, 2021 UIan Cleary
Ibhlog inokuba ngumthombo omkhulu wezithuthi kwiwebhusayithi yakho, kodwa kuthabatha ixesha ukwenza iiposti zebhlog kwaye asisoloko sifumana iziphumo esizifunayo. Xa ubhloga, ufuna ukuqinisekisa ukuba ufumana elona xabiso liphezulu kuyo. Kule nqaku, sichaze izixhobo ezi-5 eziza kunceda ukuphucula iziphumo zakho kwiiblogi, ezikhokelela ekugcwala kakhulu kwaye, ekugqibeleni, kwintengiso. 1. Yenza umfanekiso wakho usebenzisa i-Canva Imifanekiso ebanjiweyo